Blog - Xarunta Caafimaadka ee Sadler
Ku Soo Noqoshada Daryeelka Ilkaha ee Ka Hortagga ah
Daawaynta joogtada ah ee ilkuhu waa qayb muhiim ah oo ka mid ah ilaalinta caafimaadka. Xanuunka afka waxa uu ku xidhan yahay xanuunada kale ee caafimaad sida macaanka iyo wadne xanuunka kuwaas oo xadidaya tayada nolosha. Faafida, dad badan, daryeel caafimaad, oo ay ku jiraan daryeelka ilkaha, ayaa dhinac la dhigay. Dhakhtarka ilkaha ee guud […]
May waa Bisha Caafimaadka Dhimirka: Waxyeelaynta Caafimaadkaaga Shaqsiyeed
Waxaa jira dhinacyo badan oo kala duwan oo ku noolaanshaha nolol caafimaad leh. Markay May soo dhawaato oo aanu u dabbaaldegno Bisha Caafimaadka Dhimirka, kooxda caafimaadka hab-dhaqanka ee Xarunta Caafimaadka Sadler waxay wadaageen agabka lagu ilaalinayo caafimaadka dhimirka, qiimaynta caafimaadka dhimirka iyo ogaanshaha waxaad samayn lahayd haddii aad u baahan tahay caawimo. […]
Muhiimadda Bixiyaha Daryeelka Koowaad
Laakin muhiimada bixiyaha xanaanada aasaasiga ah ayaa ka baxsan awooda uu u leeyahay inuu daboolo arimo badan. Aasaaska daryeelka bixiyaha xanaanada aasaasiga ah waxay ku siinaysaa joogtayn iyo hufnaan heerar kala duwan ah.
Sadler wuxuu u shaqeeyaa inuu ku daweeyo, ma aha oo kaliya qabatinkaaga
Waxay dareemi kartaa culeys marka aad go’aan ka gaareyso inaad caawimo u hesho balwadda. Daawaynta Sadler ee Xanuunada Isticmaalka Opioid (MOUD) waxa ay halkan u joogtaa si ay u caawiso kuwa raadinaya daryeelka jawi soo dhawayn iyo taageero ah.
Kooxda Shaqaalaha Caafimaadka Bulshada & Baahiyaha ay wax ka qabato
Kooxda Shaqaalaha Caafimaadka Beesha waa qayb muhiim ah oo ka mid ah habka Maareynta Kiis-ku-salaysan ee Bulshada halkan Sadler.
Xarunta Caafimaadka ee Sadler » Blog